चिनियाँ परम्पराहरू: बैठक आफ्नो प्रेमिका गरेको परिवार छ ।
चीन, म प्राप्त एक ठूलो खुराक संस्कृति आघात को समय देखि समय छ । संग व्यवहार को बृद्धि र को यो अद्भुत देश छ, म अक्सर आफैलाई पाउन को बीचमा कि अवस्थामा म पूर्णतया बुझ्न सम्म म गहिरो गोता मा तिनीहरूलाई छ । केही बिंदु समयमा, म भेट एक सुन्दर केटी भनेर म तुरुन्तै प्रेम मा गिर. अनगिन्ती कथाहरू भयो हाम्रो प्रयासमा प्रत्येक अन्य बुझ्न एक भाषा मा के बाहिर आए मेरो मुख रूपमा मौन र एक अजीब खुसी अनुहार । उत्साहित.
कसरी पक्का छैन वर्णन गर्न हिला मेरो औंलाहरु, वा स्तब्ध भावना मा मेरो घाँटी, वा पुतलीहरु मेरो पेट मा.
खराब प्रकारको पुतलीहरु
कुरूप हुन्छन् । अनुसार मेरो आमा, म छु एक धेरै साहसी व्यक्ति । यो साँचो हुनुपर्छ, किनभने त्यो त भन्छन् । खैर त्यो पनि भन्छन् टाउको पछि तपाईं तातो चकलेट पिउन किनभने तपाईं माथि फेंक. जे भए पनि । म थियो, फेरि प्रमाणित गर्न छ कि त्यो सही थियो, त्यसैले म स्वाभाविक लिए मेरो बाँकी हर्मोन र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न भर्ना आफैलाई मा एक महाकाव्य यात्रा पूरा गर्न मेरो प्रेमिका गरेको लागि परिवार को वसन्त चाडमा । त्यसैले, म त्यहाँ थियो । पैकिंग मेरो झोला र आफैलाई सोधेर हो भने सबैभन्दा मूर्ख विचार संसारमा, वा यो थियो भने एक ठूलो सप्ताह दूर सबै देखि शहर प्रदूषण र तनाव छ । मा बसिरहेका एक बस लागि घण्टा थिएन कि खराब छ । रोकिराखेको मेरो मूत्राशय को लागि घण्टा थियो, यद्यपि. तपाईं रोक्न सक्दैन बस को बीचमा राजमार्ग छ । यो अवैध छ । गर्न एक शौचालय छैन किनभने एक । एक घण्टा रेल यात्रा, त्यसपछि एक घण्टा बस सवारी, त्यसपछि एक मिनेट पैदल निकटतम कार हब प्राप्त गर्न आफ्नो प्रेमिका गरेको गाउँमा कतै बीचमा छ । कल्पना, शहर देखिन्थ्यो कहिल्यै अन्त । रूपमा बस बिस्तारै यात्रा बाहिर संघाई, उत्तरी नदी भए अझ प्रस्ट र धेरै सानो र पुल बनाएको यो यात्रा एकदम रोचक छ । धेरै त्यहाँ थिएन जा मा, कारण चिसो तापमान र भारी प्रदूषण प्रभावित कि प्रदेश समयमा हप्ता । समयमा यी बस सवारी, तपाईं मूलतः तंग बस्न र शान्त हुन । यो बिन्दु मा म महसुस भनेर ल्याउन मेरो आईप्याड थियो, यो संसारमा सबै भन्दा राम्रो कुरा छ । म धेरै पढ्न, केही खेल खेलेको छ र आकर्षित एक केही कुराहरू छन् । मा शहर को दुर्गम भाग मा, ग्रामीण जिल्ला, झूट एक सानो गाउँमा संग मात्र बस लाइनहरु, र बारेमा एक सय परिवार छ । पछि सुरुमा रसद र भूमिका, म तुरुन्त मिल्यो आमन्त्रित फिर्ता बस्न र आनन्द उठाउन एक स्वागत भोज छ । म यो स्वीकार: म पूर्ण ठीक संग चिनियाँ खाना । म प्रयास गरेको छु को एक टन फरक कुराहरू र म आशा गर्न के थाह. यो एकदम रमाइलो छ । एक भोजन मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ चिनियाँ संस्कृति छ । अधिकांश बहु-मिलियन सम्झौता हुन्छ कि हरेक दिन चीन मा, सबैभन्दा संभावना समयमा हुन एक व्यापार भोजन । एक समान फैशन मा, वसन्त समयमा तिहार, हरेक दिन खाना एक ठूलो मौका भेट्टाउने संग नातेदार, चिन्न नयाँ छोराहरू मा व्यवस्था र अर्को वर्ष को धन, सफलता र भाग्य । घुमाउन एक बिट मा खाना विषय: यो रोचक कसरी सानो भाग चिनियाँ भोजन को लागि यो सजिलो बनाउन ठूलो समूह को मान्छे साझेदारी गर्न । चपस्टिक राख्न खाना मा गास-आकारको भाग, प्लस अनुमति दिन्छ यो तल शांत गर्न जबकि यो देखि यात्रा को तातो प्लेट आफ्नो मुख । समग्र, यो एक सुखद तरिका को जडान संग स्वाभाविक आफ्नो खाना बिना, को चाँदी कटलरी । समयमा खाना विशेष गरी किनभने, यो वरिपरि, र मलाई जान मा नायक शून्य देखि मिनेट. मेरो प्रेमिका आमाबाबुले बुझेका थिए र पहिले नै लागि तयार यस परिदृश्य छ । तिनीहरूले पनि सुनेका कथाहरू बारे विदेशीहरू बल को आफ्नो रक्सी, त्यसैले तिनीहरू तयार वरिपरि क्यान यो स्वादिष्ट बियर । यो खाना मा यो फैशन भयो भन्दा र अधिक फेरि समयमा अर्को दिन । एक गैर-स्टप वर्षा को खाना र रक्सी मा तालिका छ । यो एकदम साधारण मान्छे को लागि पनि धुवाँ एक भोजन समयमा, जब तिनीहरूले मलाई चढाएको चुरोट छ । अधिकांश विषयहरू छलफल समयमा खाना थिए बारे नयाँ कारखानों, नजिकका सरकार, बच्चाहरु, परिवार मान्छे विवाह रही, नातेदार मा समस्या छ, धनी मान्छे, गरिब मान्छे, खाना, आदि.
एक विशाल सरणी को सामान्य छलफल
मातेको मामा, शेखी पर्खाल मा बाहिर प्राप्त गर्न प्रयास, को घर र चिल्ला मान्छे मा वरिपरि उहाँलाई । यो एकदम साधारण छ मा इक्वेडर, त्यसैले म लाग्यो, रक्सी प्रस्ताव थियो मलाई यस्तै दृश्य छ यहाँ । लागि. यो वास्तवमा एक छोटा मिश्रण छ, भिटामिन बी, केही कलेजो बढाने जडीबुटी र अदुवा. यो काम गर्दछ, म अनुमान । अलग देखि सबै खाना अनुभव, यो यात्रा को उजागर निश्चित थियो परिवार भेला र शान्ति कि यो ल्याए यात्रा । यस अघि दिन, म सबै थाह थिए कथाहरू यी सबै वर्ण मा मेरो प्रेमिका गरेको जीवन । बैठक व्यक्ति तिनीहरूलाई मदत गर्न मलाई धेरै बुझ्न कुराको बारेमा उनको जीवन । त्यो आउँछ एक धेरै, नम्र परिवार समर्पित बढ्न सानो बाली, खेतमा कोडांतरण लागि इन्जिन खेत गाडी र सिर्जना स्पेयर पार्ट्स लागि भारी मशीनरी छ । अध्ययन पछि पर्यावरण विज्ञान मा एक नजिकैको शहर, त्यो उत्प्रेरित गर्न पागल महानगर को संघाई. एक पटक त्यो भेट शहरी विश्व, त्यो प्रेम मा गिर को संयोजन प्रकृति र मानिसले बनाएको संरचना र भए भित्री डिजाइनर त्यो अब छ । सायद किनभने आफ्नो बच्चाहरु को अन्तमा एक ब्रेक देखि आफ्नो जागिर र जीवन समर्पण गर्न केही समय को परिवार । यो एक बोध कसरी यस्तै यो मेरो आफ्नै जीवन, विचार म जीवित छु समय क्षेत्र देखि दूर मेरो आमाबाबुले. पछि सुरुमा भूमिका र संक्षिप्त व्याख्या के म के जस्तै म महसुस, म अदृश्य भए, तिनीहरूलाई छ र म भए एक व्यक्ति मा बसिरहेका परिवारका तालिका छ । जबकि मेरो, यी मानिसहरू को भन्दा म बैठक थियो चीनी बोल्न, तर एक स्थानीय क्षेत्रीय भाषा भनेर भिन्नता को एक धेरै छ । भने पनि म चाहन्छु धाराप्रवाह हुन, यो छ छैन मलाई मदत भन्ने धेरै छ । दिन । यो बिन्दु मा, म महसुस, म मूलतः बोर्डिङ विवाह डुङ्गा रूपमा चाँडै म चरण मा, मेरो आमाबाबुले मा व्यवस्था गरेको गृहनगर । म चरण मा आफ्नो शहर । म चरण मा आफ्नो यार्ड छ । म भित्र गए आफ्नो घर छ । म खाए आफ्नो खाना छ । म चोरेछ एक मैनबत्ती कि भयानक छ । को एक ठूलो बीच संघाई र मेरो प्रेमिका गरेको गृहनगर वातावरण छ । हावा गुणवत्ता जानिन्छ को एक शुद्ध मा क्षेत्र, र थियो हुनत एक खराब बादल को प्रदूषण भनेर आए देखि उत्तर पश्चिम अघिल्लो दिन, रात मलाई चढाएको को एक दृश्य तारा. चिनियाँ आविष्कार, त्यसैले तिनीहरू गर्व को यो र धकेल्नु यो मा आफ्नो अनुहार (कान ।) मार्फत र आतिशबाजी छ । एक पटक तपाईं भूमि चीन मा पहिलो समय, तपाईं द्वारा सुरक्षित छन् एक अदृश्य ढाल छ ।. तपाईं सुन्न सक्दैन, तपाईं गर्न सक्छन् छैन, घर फिर्ता यो हुन्छ विपरीत छ । पनि व्यस्त संसाधन अनन्त जानकारी भइरहेको हाँ माध्यम रेडियो, टीभी, कुराकानी, र यति मा । भाषा बाधा मा चीन गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईं अधिक समय खर्च गर्न आफ्नो महत्वपूर्ण स्व. अधिकांश मानिसहरू माध्यम जान यो चरण मा आफ्नो पहिलो वर्ष, र प्रभाव सामान्यतया कि पछि समय को अवधि ।, तपाईं सबैभन्दा संभावना पहिचान को बुनियादी यो, र अचानक आफ्नो संरक्षण गएको छ । तपाईंलाई थाहा छ, जब मेरो मामला मा, यो यात्रा मलाई सम्झाए भन्ने नै भावना छ । अचानक, केही जस्तै चीनी. स्थानीय क्षेत्रीय भाषा लागि यो असम्भव गरे मलाई पनि को सुत्र मा लाग्नुभएको थियो के. म धेरै मा मेरो प्रेमिका कुराकानी गर्न, तर यो छैन गर्नुभयो गर्न कुनै समस्या ल्याउन हाम्रो दैनिक अन्तरक्रिया उनको परिवार संग. मूल्य को कुरा यहाँ थियो रहँदा भन्दा सस्ता म कल्पना । यहाँ आउँदै र खरीद सबै हामी आवश्यक दिनसम्म भन्दा कम लागि, थियो, एक ठूलो प्रभाव छ । यो मलाई सम्झाए को राम्रो पुराना दिन मा इक्वेडर, जब खाना थियो, सस्तो र सुरक्षित छ । हाम्रो बाटो मा फिर्ता, हामी गरे एक वैकल्पिक मार्ग संग, वास्तविक सडक । त्यो थियो गर्दा मलाई गरे मलाई माध्यम हिंड्न. दिन पछि, हामी आइपुगे । म अब एक नव आगन्तुक । म महसुस भएको थियो एक धेरै अधिक जोडिएको अनुभव म जीवित थियो. म आनन्द हिँड्नुभएको, सडकमा, चिस्यान को पसलहरु र भन्ने ठाउँमा प्रयोग पानी बाफ माथि गर्मी हावा र छाला, म आनन्द सुन्ताला, पाउडर दूध मा मेरो तात्कालिक कफी मग, को प्रारम्भिक बिहान, जादू को सुगन्ध सफा, नयाँ घर, विपरीत मा पुरानो ढुसी लागेको गन्ध को पुरातन ठाउँमा छ । म मेरो साथी सम्झना छ । म मिस संघाई एक सानो बिट छ । म सम्झना, मेरो आफ्नै घर र मेरो बिरालो छ । म एक सानो पाएका बिल्ली भित्र एक भान्सा, र म मा गए संग मेरो फुजी प्रयास प्राप्त गर्न उहाँलाई एक शट छ । उहाँले भागे, तर म अझै पनि प्राप्त गर्न व्यवस्थित, एक कब्जा को क्षण । फिर्ता संघाई, म अक्सर पनि व्यस्त समाधान गर्न प्रयास कुराहरू र म कसरी बिर्सन सुन्दर ठाउँ हुन सक्छ । यदि म पट्टी तल सबै रोशनी, आकाश, फैंसी कार र, क्लब, पसलहरु, सुपरमार्केट र सेलफोन, म अन्त संग एक धेरै प्राकृतिक र इमानदार संस्करण को के मलाई सबैभन्दा.
ठूलो शहर को पूर्ण नक्कली मान्छे र भवनहरु
अधिक तपाईं देखाउन, अधिक छ आफ्नो कथित धन छ छ । अधिक तपाईं कुरा, तपाईं अधिक दाबी लिएका छौं । सबैभन्दा अग्लो भवन छ, उच्च किराए हुन्छ (तथ्यलाई बावजुद तपाईं देख्न सक्छौं बकवास मा एक प्रदूषित दिन). लिन भनेर सबै दूर, र तपाईं हुनुहुन्छ मूलतः मध्य को एक सानो ठाँउ, मान्छे को पूर्ण जीवन बिताउन जो आफ्नो दिन-देखि-दिन गर्दै धेरै, मानव कुराहरू । म आए जहाँ बिन्दु गर्न म बुझे, कुनै कुरा तपाईं के पढ्न अघि, वसन्त चाड समयमा चिनियाँ नयाँ वर्ष छ, म स्वीकार, म थियो एक ठूलो खुराक को धैर्य र मेरो सिस्टम, र मलाई मदत गर्न माध्यम प्राप्त यो हप्ता, तर तपाईं आफ्नो कार्ड खेल्न भने सही, तपाईं निश्चित रूप देखि बाहिर आउन विजयी भएर, प्रशंसा र अङ्कमाल गरेर हरेक व्यक्ति मा परिवार । सबैभन्दा आमाबाबुले लागि, संसारमा बोध आफ्नो बच्चाहरु माथि बढ्दै छ, भन्न गर्दा, तिनीहरूले गुमाउन दाँत, वा जब आफ्नो छोरी रुन लागि, एक केटा वा जब आफ्नो बच्चाहरु स्कूल जान, वा कलेज । चिनियाँ आमाबाबुले, यो क्षण अक्सर ढिलो आउँछ, जब आफ्नो छोरी ल्याउन आफ्नो गर्लफ्रेंड्स, वा जब आफ्नो छोरा ल्याउन आफ्नो ब्ययफ्रेंडस छ । यो संकेत तिनीहरूलाई लागि. हरी प्रकाश छ । यो छ जब तिनीहरू जान गरौं, आफ्नो छोरी गरेको हात गर्दा र तिनीहरूले हेर्न उनको सडक पार, हात रोकिराखेको अर्को व्यक्ति संग
← चिनियाँ महिला डेटिङ - मा चीन